I-Suzy's Quiet Home I-70 yizibhedlela. - I-Airbnb
I-Suzy's Quiet Home I-70 yizibhedlela.
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Suzy
Ngo-371 Mbps, ungashaya izingcingo zevidiyo futhi udlalele lonke iqembu amavidiyo.
U-Suzy Ungumbungazi ovelele
Ikhaya elinethezekile endaweni ephephile, ethule eduze nezibhedlela kanye ne-I-70. Umfudlana waphansi kanye nokuvunguza kwesitimela okude ebusuku kwengeza isifiso. Amakamelo okulala aqashiwe angu-3 aphezulu anokugeza okuhlanganyelwe. Ezinye izihambeli zingabhukwa kwamanye amagumbi okulala. Lolu hlu olwegumbi lokulala elingu-1 futhi uma kudingeka, usofa wokulala othokomele otholakala egumbini lokuhlala. Uma udinga igumbi lokulala elingaphezu kwe-1, bheka ezinye izinhlu ezinesithombe sekhava esifanayo ukuze uhlole ukutholakala. Ngihlanganyela ikhaya lami neGolden Retriever kanye nekati.
Ikhaya lami linokuthula futhi abantu bazizwa bekhululekile lapha. Imibhede nezinto zombhede zisezingeni eliphezulu kakhulu. I-inthanethi iyashesha kakhulu. Iziqandisi ezincane emakamelweni okulala. I-Youtube tv/ama-smart TV emakamelweni okulala. Izikhiye kuyo yonke iminyango yamakamelo okulala. Ngiqasha amagumbi okulala angu-3, atholakala phezulu ngegumbi lokugeza elihlanganyelwayo. Ikhaya lihlanzwe ngobungoti masonto onke futhi sikhokha umholo wokuziphilisa. Ama-Red ahlukile amagumbi anuka kamnandi kodwa uma uzwela, ngitshele kusengaphambili futhi ngizosusa phakathi nokuhlala kwakho. Isistimu yamanzi ashisayo engenawo amanzi. Uzozizwa kahle ngemva kweshawa emnandi, ende. Uma ungakaze ugeze ngamanzi athambile, uzobona umuzwa ohlukile ngenkathi ugeza futhi izinwele zakho nesikhumba kuzoba mnandi kakhulu kamuva.
I-wifi esheshayo – 371 Mbps
I-HDTV ene- Apple TV, I-Netflix, I-Amazon Prime Video, I-HBO Max, Hulu, ikhebula ye-premium
Indawo yasePotwin enomlando inomlando omningi namakhaya amahle. Imigwaqo yezitini isekhona emigwaqweni eminingi futhi izihlahla ze-oki zindala kunanoma yimuphi wethu. Awusawatholi amakhaya akhiwe ngale ndlela.
I am open and easy to get to know and share my home with a Golden Retriever (Jake) and a very social cat (Leo). I am a life coach specializing in ADHD and also work from home for…
Uzosala wedwa ngaphandle kokuthi ufune inkampani.